प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको पुर्ख्यौली बपौती होइन – Karnalikhabar
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको पुर्ख्यौली बपौती होइन
नारायण गाउँले, धेरैले ज’ननिर्वाचित सरकारलाई घे’राबन्दी गरिएको भन्ने तर्क गरेको देखियो ! पहिलो त ओली सरकार ज’ननिर्वाचित सरकार होइन । सरकार संसदले चुनेको हो । जनताले त आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिका रूपमा सांसद र पार्टी चुनेका हुन् । हालको शासकीय व्यवस्थामा जनता भनेका सांसद हुन् । जनताले कानुन बनाउने भनेको हामी सबै जना कलम बोकेर सिंहदरबार पस्ने भन्ने होइन । प्रतिनिधिका रूपमा सांसदले हाम्रो आबाज र मत बोक्ने हुन् । जसले धेरै सांसदको विश्वास जित्छ, त्यसले सरकार बनाउने हो ।
जुन दिन तिनको विश्वास सकिन्छ, त्यस दिन छोड्ने हो । बहुमत ल्याएको नेकपाले हो । ओलीले जितेको आफ्नो एउटा सिट मात्रै हो । झापाका जनताले उनलाई सांसद बनाएका हुन् पाँच वर्षका लागि । यत्ति सत्य हो । र, सांसदका रूपमा काम गर्न उनलाई कसैले बाधा पुऱ्याएको थिएन । नेकपाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । नेकपाको बहुमत उनको पक्षमा नरहे उनले रा’जीनामा दिने हो, पार्टीलाई ध्व’स्त बनाउने होइन । हामीले उत्कृष्ट भनेको व्यवस्था नै यही हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको पुर्ख्यौली ब’पौती होइन, जुन उनले प्रचण्ड या माधव नेपाललाई टीका लगाएर दिन या नदिन सकून् ।
उनले दिने संसदलाई हो । पार्टीलाई हो ।दोस्रो घे’राबन्दी भनेको के हो ? संसदीय व्यवस्थामा घे’राबन्दीलाई अविश्वास भनिन्छ । र विश्वास जि’त्न नसके रा’जीनामा दिनुपर्छ । यसको कानुनी व्यवस्था छ । उनले के काम गर्न नपाएको हो ? गोकुललाई छा’नबिन बाट बचाउन पाएनन् कि ? जहाजबिना नै पानी जहाज कार्यालय खोलेर जागीर खुवाउन पाएनन् कि ? डुब्न लागेको वायुसेवा निगममा हा’किमकै पोस्ट थपेर भ’र्ती गर्न पाएनन् कि ? बालुवाटार का’ण्डमा रङ्गे हात देखिएका विष्णु पौडेललाई देशको ख’जाञ्ची नै बनाउन पाएनन् कि ? यतिलाई त चाहे जति दिएकै हुन्, अलिकति से’टब्याक भएको ओ’म्नीमा न हो ।
सं’विधानभन्दा आँखा र मन पढ्ने राष्ट्रपति भएकै कारण उनको ईगो सफल भएको हो । नत्र हिजोमात्रै संविधान लेख्दै गर्दा सजिलै पार्टी फु’टाउन नसकियोस् र ल’हड़मा संसद भ’ङ्ग गर्न नसकियोस् भनेर संविधानमा हामीले लेख्यौं भन्दै छाती फु’लाउने ओलीहरू नै हुन् । सोच्नुस् त, से’टिङ् अनुसार नै अदालतले यो फै’सला स’दर गर्ने हो भने संसदमा प्रधानमन्त्रीवि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कहिल्यै नआउने भयो । आए संसद भ’ङ्ग गरे भयो । किनकि जो आए पनि ओलीको भाषामा संसद-निर्वाचित नभएर जननिर्वाचित नै हुने भयो ।
भोलि ओलीको ठाउँमा देउबा या प्रचण्ड आउलान् । संसदभन्दा संसदले चुन्ने प्रधानमन्त्री ठूलो हुने भएपछि र संसदप्रति उ’त्तरदायी बन्न नपर्ने भएपछि तिनले म’नोमानी गरे पनि तिनलाई फे’र्न नसकिने भयो । संसद स्वतन्त्र समेत नहुने भयो । मेरो कुरा नमाने तेरो जागिर खाइदिन्छु भने भयो । उही व्यवस्थाबाट बनेको ओली सरकार ज’ननिर्वाचित हुने र अरू नहुने भन्ने पनि भएन । तिनले पनि जनताको ना’सो जनतालाई नै बुझाउँदै गए भने के होला ? अनि सुशील कोइरालाक़ो जननिर्वाचित सरकार ह’टाएर ओली प्रधानमन्त्री नबनेका पनि होइनन् ।
हिजो राजनैतिक स्था’यित्वका लागि सजिलै पार्टी फु’टाउन नपाइने बनायौं भन्ने र ताली खाने, अनि आफ्नो पालामा फु’टाउने अध्यादेश ल्याउने ! हिजो ल’हड़को भरमा संसद भङ्ग नहोस् भनेर व्यवस्था गऱ्यौं भन्ने र ताली खाने अनि आज संसद भ’ङ्ग गर्ने अधिकार मेरै हो भन्ने कुतर्क गरेर पनि हुन्छ र ?- नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट
अघिल्लो - ओलीले किरा फट्याङ्ग्रा चिन्हबाट आगामी चुनाव लड्छन् : नेतृ झाँक्री
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा मिस एण्ड मिस्टर आइकोनिक मोडल–२०२१हुने - पछिल्लो
त्यसैले त भन्छु, ‘आदेश देउ प्रचण्ड अर्को युद्ध लड्न तयार छौँ’
जनताको नजरमा आशा, भरोसा र विस्वास पात्र, “सधै अमर रहने अमर”
नेकपा : चर्चा माहाधिवेशन र यसभित्रको अन्तरकथा